Door noocee ah ayey CBD ku leedahay berrinka alaabta xayawaanka?
1. Waa maxay CBD? CBD (ie cannabidiol) waa qaybta ugu weyn ee aan maskaxda ka jirin ee xashiishadda. CBD waxay leedahay saameyn daawooyin kala duwan, oo ay ku jiraan anti-walwalka, anti-psychotic, antiemetic iyo anti-bararka guryaha. Sida laga soo xigtay warbixinnada ay soo heleen Web of Science, Scielo iyo Medline iyo ...
1.Waxaa lafilayaa inay wanaajiso halista kalyaha oo shaqeysata iyo dhimashada cudurada kilyaha WuXi AppTec kooxdeeda ka kooban Medical New Vision ayaa sii deysay war sheegaya in daraasad ay sameeyeen 10,000 oo qof ay muujisay in metformin laga yaabo inuu hagaajiyo halista kalyaha oo shaqeyn waaya iyo dhimashada cudurka kalyaha. Daraasad lagu daabacay t ...
Geedi socodka granulation qoyan
Kiniiniga ayaa hadda ah mid ka mid ah foomamka qiyaasta daawada ee aadka loo isticmaalo, oo leh soosaarka ugu ballaaran iyo kan ugu ballaaran ee la isticmaalo. Nidaamka kala-soocidda qoyan ee dhaqameed ayaa weli ah habka guud ee soo-saarka daawooyinka. Waxay leedahay habsocodyo wax soo saar bisil, tayo wanaagsan oo walxo leh, wax soo saar sare ...